Intaba kaClare - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAlmudena
Yindlu yamatye entliziyweni yeentaba zeCantabrian ejikelezwe yindalo. Kukulungele ukuphumla, ukonwabela ukucula kweentaka kwaye, ngaphezu kwakho konke, ukuzola. Ikwakufuphi kakhulu nolwandle olukhulu lwaseLaredo (12.6 km) kunye nazo zonke iinkonzo ozidingayo.
Yiza, phumla, wonwabe kwaye ubuye.
Inebhedi eyi-1'35cm, ikhitshi eligcweleyo elineepantry ezigcwele izinto ezisisiseko (ioyile, iviniga, ityuwa, izinto ezigcina iswekile, ikhitshi...), amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo aneshawa (ijeli, ishampu, iikhrimu, iitawuli. .), zonke iintlobo zezixhobo ukuzifundela ukuba imozulu embi (imibala iincwadi, iincwadi, iincwadi zamabali, iincwadi zemifanekiso, TV, irediyo ...) okanye xa ilanga likhanya Uyakwazi kwaye akufuni ukuba evela Montana de Clara (une koomandlalo, loungers, tipis, kwiindawo, paellera ...). Inobude obubini kunye ne-staircase (indawo encinane). Phezulu kukho ibhedi kwindawo evulekileyo kwaye ikhululekile kakhulu enye yamagumbi okuhlambela agcweleyo, kwaye ezantsi ligumbi lokuhlala-igumbi lokutyela-ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
4.95 · Izimvo eziyi-86
Uphezulu entabeni kodwa ezantsi, umgama omde (malunga neekhilomitha ezi-5 ukuya e-Ampuero) unazo zonke iinkonzo eziqinisekisa ukuphumla kwakho (indawo zokutyela, iilwandle, iivenkile ezinkulu...), ukuzola kwakho (isibhedlele, iziko lezempilo, ikhemesti. ...) kunye nokhuseleko yakho (Civil Guard, zocweyo ...).
Ashwankathelo: yiza, phumla, wonwabe kwaye ubuye.
Umbuki zindwendwe ngu- Almudena
Ndikwamkela ngokobuqu yonke into ilungile ukuze ungaphoswa kwanto kwaye siza kubona kunye ukuba yonke into isebenza njani. Ukuba ubona kukho into engekhoyo, kufuneka uyicele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ampuero